Judo – Rambeloson Lita: nahafahana nampitombo ny haavo teknika ny fihibohana | NewsMada
Judo – Rambeloson Lita: nahafahana nampitombo ny haavo teknika ny fihibohana
Judoka avy amin’ny klioban’ny Esca, sokajy latsaky ny 66 kg, ary handray 23 taona, ny nanontaniana ny fomba niainana ny fihibohana sy ny hoaviny eo amin’ity taranja ity.
GazetyTaratra(*): Ahoana ny niatrehanao ny fihibohana?
Rambeloson Lita(-) : Tamin’ny voalohany, somary sahirana kely satria tsy zatra ilay tsy mivoaka. Taty aoriana avy eo, miezaka mamorona zavatra atao ato an-trano, ankoatra ny kotrana atao isan’andro, tsy dia maninona intsony. Izany hoe, tena hitako tsy ampy ahy ny mikotrana miaraka amin’ny klioba satria mila namana hatrany ny fanatanjahantena.
* Inona ny kotrana nataonao irery izany?
– Izahay ao anatin’ny klioba, efa hatramin’izay, samy nahazo “travail”, efa talohan’ny fihibohana, ka manatanteraka izany foana izahay ato an-trano. Fa ny hanampiako azy fotsiny isaky ny hariva, manao “exercices musculation” kely sy “pompe abdo” ary “gainage”. Sady mba miaraka no mampikotrana ny ray aman-dreniko koa.
*Raha miverina amin’ny laoniny ny toe-draharaha, vonona avy hatrany hiatrika ireo fifaninanana izay mitranga eo ve i Lita?
– Betsaka ny “travail” mila namana tokony hatao vao manao fifaninanana. Manana tombony kokoa ny avy any amin’ny faritra satria mbola afaka miara-mikotrana izy… Raha hoe asiana iray volana dia vonona tsara.
* Fanentanana kely ataonao amin’ny mpanao fanatanjahantena
– Manentana ny mpanao fanatanjahantena rehetra tsy tonga dia hamotsotra ny haavo teknika efa azo teo alohan’ny fihibohana fa hanohy hatrany ny “travail” na any an-trano aza. Betsaka ny fotoana izao ahafahana manao “travail” teknika antsika manokana, maro koa ny mampiasa « internet » sady mitady zavatra hatrany na kotrana na fanampiana sy ny fanatsarana ny teknika.
* Ahoana ny fahitanao ny fanemorana ny “Lalao olympika”?
– Mbola mety amiko tsara, afaka manampy kotrana efa natao sy ny banga nandritra ny fihibohana.
*Ny tohin’ny lalanao eo amin’ity taranja ity?
– Tena mbola miandrandra handeha lavitra, efa nanao “Lalao afrikanina” teo nitsapa ny haavo teknika ary efa manarina sy manampy foana ny kotrana.